Amanneɛbɔ a Wɔanya Afi Europe Nnansa Yi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Nea ɛrekɔ so wɔ Europe
Kane no, na nnipa a wɔwɔ Europe ani gye nyamesom ho paa, nanso nnansa yi deɛ wɔn mu dodo no ara mfa nyɛ hwee. Wei nyinaa akyi no, sɛ wote sɛnea nnipa a wɔwɔ Europe ka Bible ho asɛm nnansa yi a, ɛbɛyɛ wo nwonwa.
Akokoaa te ne Maame Nne a, Ɛboa no Sɛn?
Nyansahufo bi a wɔwɔ Italy kuro Milan kyerɛ sɛ, ɛyɛ a adɔkotafo de afidie bi bɔ mmofra a wɔn bere anso na wɔwoo wɔn no nsa bere a wɔwɔ ayaresabea no. Saa afidie no ma mmofra no tumi te wɔn maame nne, na ɛboa wɔn akwahosan paa. Afidie no ma mmofra no te wɔn maame nne te sɛ nea wɔda yafunu mu ara pɛ. Nyansahufo no wiee wɔn asɛm no sɛ, “Sɛ mmofra a wɔn bere anso na wɔwoo wɔn no te wɔn maame nne saa a, ɛboa wɔn paa.”
NEA BIBLE NO KA: “Madwodwo me kra, na ayɛ komm te sɛ abɔfra a afei na watwa nufoɔ a ɔda ne maame soɔ.”—Dwom 131:2.
Wopɛ Wo ho Dodo?
Wɔbisabisaa mmofra 565 nsɛm wɔ Netherlands. Wɔhuu sɛ mmofra a wɔpɛ wɔn ho paa na wɔsusu sɛ “wɔkyɛn obiara no yɛ wɔn a wɔn awofo ama atɔ wɔn tirim sɛ wɔn so wɔ mfaso kyɛn wɔn mfɛfo” enti ɛnsɛ sɛ awofo no ma “biribiara hia wɔn.” Nea ɔkyerɛw saa asɛm no kaa sɛ, “Sɛ awofo ka kyerɛ wɔn mma sɛ wɔkyɛn afoforo a, mmofra no gye di. Sɛ mmofra yi de saa nyini a, ɛremmoa wɔne afoforo.”
NEA BIBLE NO KA: ‘Meka kyerɛ mo mu biara sɛ ɔmmmu ne ho nntra deɛ ɛsɛ; na mmom ɔnnwene nnya anidahɔ adwene.’—Romafoɔ 12:3.
Wɔanyini Paa Nanso Wɔmpɛ sɛ Wɔwu
Nhwehwɛmufo bi a wɔwɔ Heidelberg Suapɔn mu wɔ Germany bɔɔ amanneɛ sɛ, “Yareɛ ne honam mu mmerɛwyɛ nyinaa akyi no, nnipa a wɔadi mfe 100 ne akyi mpɛ sɛ wɔwu. Nnipa a wɔbisabisaa wɔn nsɛm no, woyi 4 biara a, emu 3 bɔ mmɔden sɛ wɔbɛhwɛ wɔn ho so yie na ama wɔatena ase akyɛ. Wɔde nneɛma sisii wɔn ani so yɛɛ ho adwuma; wɔkyerɛɛ sɛ wɔwɔ anidaso na wɔmfa wɔn som nni agorɔ. Afei nso wɔbɔ bra pa.
SUSU HO: Sɛnea Ɔsɛnkafoɔ 3:11 ka no, ɔpɛ a yɛwɔ sɛ yɛbɛtena ase daa no kyerɛ sɛn?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan NYAN! December 2015 | Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie
December 2015 | Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie
NYAN! December 2015 | Ma Asomdwoe Ntena Wo Fie